नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा
चैत २२, काठमाडौं (अस) । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६९ औं वार्षिक साधारण सभा बैशाख २१ गते एयरपोर्ट होटल सिनामङ्गल, काठमाडौंमा हुँदैन । कम्पनीको चैत २१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
साधारण साभाको प्रस्तावमा हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको रू. १ करोड ३६ लाख ६१ हजार ४ सय ८४ दशमलव ९७ बराबर को बोनस शेयर वितरण गर्ने रहेको छ । साथै कम्पनीले यो बोनस शेयर वितरण र एक सय प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी पश्चात कायम हुने चुक्तापूँजीको ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । कम्पनीले बैशाख ५ गतेदेखि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्दैछ । सो हकप्रद शेयर निष्कासन र बाँडफाँट पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६१ करोड ७६ लाख ३८ हजार ७ सय ४ दशमलव ९७ पुग्नेछ । कम्पनीले ६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ३ हजार ८ सय ६३ दशमलव २० पुग्नेछ ।
बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । यो साधारण सभा प्रयोजनको लागि शेयरधनीदर्ता पुस्तिका बैशाख ७ गतेदेखि बन्द रहनेछ । बैशाख ६ गतेसम्म शेयर किन्ने शेयरधनीले यो बोनस शेयर पाउनेछन् ।